Iyo Apple Chitoro app inovandudzwa ichiwedzera rutsigiro rutsva rwe 3D Kubata | IPhone nhau
Iyo Apple Chitoro app inovandudzwa ichiwedzera rutsigiro rutsva rwe3D Kubata
Zvinotaridza kuti mashandisirwo anoitwa Apple neiyo iOS nharembozha ecosystem anogara ari ekupedzisira mafomu ekuvandudzwa kuti awedzere iwo matsva mabasa ayo anobva kuCupertino ari kuwedzera mune yega yega vhezheni yesystem yavo yekushandisa. Iko shanduko kubva kuIOS 6 kuenda kuIOS 7 yaive shanduko yakakura mukugadzirwa kweanoshanda system ichisiya skeumorphism padivi pechigadziro chakati sandara, shanduko iyo vanhu vazhinji vaisada asi iyo nekufamba kwenguva ivo vakagadzirisa uye zvirokwazvo havadi kudzoka. Mushure meiyo shanduko, iyo iBooks application yakaramba ichipa iyo yekare dhizaini kwemwedzi yakawanda, izvo zvakakwezva kutarisisa kwakawanda nekuda kwekusiyana pakati peiyo sisitimu yekushandisa uye kunyorera kuverenga mabhuku.
Iyo Apple Chitoro kunyorera ndechimwe chekushandisa icho Apple chakaisa parutivi mumwedzi ichangopfuura. 3D yekubata tekinoroji yakarova pamusika mushure mekumisikidzwa kweiyo nyowani iPhone 6s uye 6s Plus mamodheru munaGunyana gore rapfuura, kunyangwe zvakatora dzimwe nyika yakati rebei. Kubva ipapo, Apple yanga ichivandudza mashandiro ayo imwe neimwe pakunonoka chiyero uye seuchapupu hweichi chishandiso cheApple Chitoro icho akawedzera chete chikamu chezviitiko zvinopihwa neiyi tekinoroji.
Nezuro paminiti yekupedzisira, iyo application inotibvumidza kuti tibate Apple, pamusoro pekutenga chero chishandiso kubva kukambani kana kuita musangano neGenius Bar, yakagadziridzwa kuwedzera rutsigiro nyowani yeiyo 3D Kubata tekinoroji nezvimwe zvinhu pamwe nekuwedzera rutsigiro rwePeek & Pop kubva mukati mekushandisa. Kubva panguva ino, pese patinodzvanya pane chinongedzo uye nekuchengeta chigunwe chakadzvanywa tinogona kuona kuratidzwa kwezviri mukati. Ehezve, iyi nyowani nyowani nerutsigiro rweiyo 3D Kubata tekinoroji inongowanikwa chete pa iPhone 6s uye 6s Plus zvishandiso, kuwedzera kune izvo zvishandiso zvinoshandisa imwe yeateki anotibvumidza kutevedzera mashandiro eiyi tekinoroji.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Iyo Apple Chitoro app inovandudzwa ichiwedzera rutsigiro rutsva rwe3D Kubata
Iyo iPhone SE inodya zvigadzirwa zveChinese mune hofori yeAsia
Zvakatora FBI 1M kuvhura iPhone yaSan Bernardino